. ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း ” လေး” – ပါဝါ (48) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » . ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း ” လေး” – ပါဝါ (48)	11
. ခြေလှမ်းဦး များနှင့် ကခုန်ခြင်း ” လေး” – ပါဝါ (48)
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 27, 2015 in History | 11 comments
ဒီတစ်လှည့် ပါဝါ ရွေးပွဲမှာ ကံစပ်သူလေး ကတော့ ဂျူဂျူးမ ပါရှင့်။
. မေဂျူလိုင် ဆိုပြီးလဲ ခေါ်လို့ရပါတယ်။ ရွာသူ လို့လဲ တင်စားထားပါတယ်။
ပို့စ်တင်တာ ရှစ်ပုဒ် ထဲပေမဲ့ မှတ်ချက်ပေါင်း ထောင်ကျော်တာမို့ ရွာထဲ အတော်လေး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကလေးမ လို့ ပြောနိုင်မှာပါ။
အင်မတန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ လျှာတစ်လစ် ပုံ avatarနဲ့ ကလေးမလေး ရဲ့ ပထမဆုံး ရွာအဝင် ခြေလှမ်းလေး က Apr 27, 2012 နေ့က ဖြစ်ပြီး “မည်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲ?” ဆိုတဲ့ အမေးလေးနဲ့ပါ။
မှတ်ချက်ပေါင်း ၂၄ခု နဲ့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတာ အားရစရာပါဘဲ။
အဲဒီ ပို့စ်လေးရဲ့ category က “Parenting & Pregnancy” မို့
ကလေးတွေ ဗျောတ်သောက်မွေး ပြီး ကိုယ့်ကလေး ကို ကိုယ် မထိန်းနိုင်မကျောင်းနိုင် ဖြစ်နေတဲ့ မိဘ များကို ရည်စူးရေးတယ် မှတ်ရပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ ဖတ်လိုက်တဲ့ အခါမတော့ ………
အကြောင်းလွဲ လို့ ရီ စရာ ဖြစ်လိုက်တာမို့ လူတွေကို စိတ်ရွှင်လန်းအောင် လုပ်ပေးတယ် သဘောထားလိုက်တာပေါ့။နော …. :-)))
အဲဒါလေးကို မိုးဇက်လေးက ထောက်ပြခဲ့သေးတယ်။
ရွာအဝင်မှာ အဲဒီ category ကိစ္စ က အသစ် တစ်ယောက် အတွက် နဲနဲ ကြောင်တတ်ကြပါတယ်။
အဲဒါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အပါအဝင် အသစ်တိုင်း တွေ့ရတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
category မရွေးမိလို့ ဖြစ်နေတဲ့ ပို့စ်လေး တွေလဲ အများကြီး တွေ့နိုင်တယ်။
တုံတုံ ရဲ့ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဆွေးနွေးပေးတတ်တာလေး တွေကိုလဲ တွေ့ရတယ်။
ကိုရင်လူထွက် လေးတစ်ယောက်ကလဲ တစ်ကူးတစ်က ဝင်ပြီး မှတ်ချက်ပေး အပြီး အဲဒီ မှတ်ချက်လေး နဲ့ ဘဲ ရပ်နေရော။
အဲဒါကလဲ ရွာထဲ စံချိန် ဖြစ်နိုင်တယ်။
အဘဖော ကို တ ခဲ့တဲ့ မောင်မောင်ဗိုက် သူလဲ ပျောက်သွားရော။
. ဒေါ်ဂျူဂျူး လေးနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ ပို့စ်က May 11, 2013 “ကူညီပေးစေချင်” ဆိုပြီး သူ့တူလေး မိုဘိုင်းဖုန်းပျောက်သွားတာ ကို အကူအညီတောင်း ထားခဲ့တာ။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပြောပြီး ကူညီခဲ့တယ် သိချင် ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
ဒီမှာလဲ မှတ်ချက်ပေါင်း ၁၃ခု နဲ့ စည်ကားလို့ပါဘဲ။
မှတ်ချက်ပေး ကူညီ သူများ လဲ သူတို့ ဘာပြောခဲ့တယ် ဆိုတာ သိမယ်တော့ မထင်။
အခုချိန် ကူဖို့ အကြောင်းကို ပြောရင် နောက်တစ်မျိုး ဖြစ်နေမလားဘဲ။
အဲဒီ ပို့စ်လေးမတိုင်ခင် အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ သူ့ရဲ့ချစ်သော မောင် အကြောင်းကို ဖွဲ့ထားတဲ့ “ပေးစာ” ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေး ရှိပါသေးတယ်။
ဒါဖတ်ပြီး ရင်ခုန်သူကလဲ ခုန် ဆိုဘဲ။
အဲဒီမှာလဲ မှတ်ချက်တွေ ၁၅ခု နဲ့ တပျော်တပါးပါဘဲ။
ရွာသူလေး ရေ။ အပြီးပျောက်မသွားပါနဲ့။
ကိုးနတ်ရှင် အကြောင်းတော့သိပေမဲ့ အခွင့်ရခဲ့ရင် ပြန်လာပါဦးလား။
လာမဲ့ ၂၇၃ ရေး ထဲ က ကျလာမဲ့ ၁ ရေး အတွက် ကြိုတင်ခံစားရင်း ….
ဇီဇီခင်ဇော် says: http://mandalaygazette.com/author/mayjuly
ရွာသူ ဂျူး ဂျူး မ ရဲ့ အိမ် အလည်သွားချင်ရင်…
Ma Ma says: မေဂျူလိုင်က ဂျူဂျူးမ ဆိုတဲ့ နာမယ်လည်း ရှိသေးတယ်။
ဂျူလိုင်လရောက်ခါနီးမှာ မေဂျူလိုင်အလှည့်ရောတာ အတော်လေးကို တိုက်ဆိုင်ထူးခြားတယ်နော်။
တခါတလေမှာ လောကကြီးက မထင်မှတ်နိုင်လောက်အောင် ထူးဆန်းလွန်းလို့……
ပရမ်းပတာနဲ့ စနစ်တကျဖြစ်တယ်လို့ ပြောမလား၊
စနစ်တကျနဲ့ ပရမ်းပတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရမလား………… မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့အတွက် မနက်ဖြန်တနင်္ဂနွေနေ့ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံမှာ ဖြေဖျော်ပွဲမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေ လူရွှင်တော်လုပ်ပြီးကပြတာကို အားကျလို့……
ပေါ်မလာ…. အတော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့ မေဂျူလိုင်လေးးးးးး ရေ………….. လို့ ဇာတ်ပြောနဲ့ ခေါ်လိုက်အုံးမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3140
surmi says: ပေါက်ဖေါ်ခေါ်တာတော့ မှတ်မိနေသေးတယ် ……
ရှူရှူးမ တဲ့ တချိန်က စ လိုက် နောက်လိုက် နဲ့ ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့။
မှတ်မှတ်မိမိ ရွာရဲ့ ပထမအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲမှာ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။
. အရီးတော့ အသက်ကယ်ဆေးသုံးနေဘီထင်ပါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
“ဟံဒရက်သောင်စင်” (ခွက် – ကြောင်) မရ ရအောင်
သီချင်း တွေ ရော
အဟောင်း တွေ အကောင်း တွေ ရော ကို
အသုံးချ ပြီး လုပ်နေတာပါ လို့စ်။ lol:-))))))))))))))))
Alinsett @ Maung Thura says: ဘယ်ဆီကို ရောက်လို့ နေသလဲ….ကွယ်…
ငှယ် .. ငှယ်…
မြစပဲရိုး says: ဝင်အားပေးလို့ ကျေးဇူး ဇီကလေး၊ ချစ်မ နဲ့ ဆက်ဆက် တို့ ရေ။
ဟုတ်တယ်နော်။ ဂျူလိုင်နားနီး မို့ မေဂျူလိုင် လေး အမှတ်တရ။
မမြင်လိုက်တဲ့ အကွက်ဖော်ပေးလို့ စိမ်းရောင်ချယ်ဗျစီ ချစ်မမ။ :-)))
Ma Ma says: မလတ်ရဲ့ အစိမ်းရောင်တန်ခိုးနဲ့ ကြယ်ဝါများရှင်ဖြစ်သွားပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မေဂျူလိုင် ဆိုလို့ ကျနော်ပန်းတနော်ပွဲသွားတုံးက ပါတယ်လို့ စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေလို့
ပြန်ရှာတော့ ပါးကွက်ကြားလေးနဲ့ ဂျူးဂျူး ကို ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါကြောင်း
ဦးကြောင်ကြီး says: ဂျူးမြစ်ဟင်း ဆားခြင်လှိုက်ထှာ…
အောင် မိုးသူ says: သွားကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်
Mike says: .ဂျူးဂျူးမ (သို့) မေဂျူ လိုင်….ပျောက်နေတာကြာပေါ့